Tag: softiweer adeeg ahaan | Martech Zone
Tag: softiweer adeeg ahaan
Arbaco, Juun 24, 2019 Arbaco, Juun 24, 2019 Chloe Smith
Maxay tahay lambarkaaga koowaad ee diiradda saara shirkadda SaaS? Kobaca, dabcan. Guul cirka ah ayaa lagaa filayaa. Waxay muhiim u tahay badbaadadaada muddada dheer: Xitaa haddii shirkad softiweer ahi ay kororto 60% sanadkiiba, fursadaha ay ku noqon karto bilyan balaayiin doolar ah kama fiicna 50/50. koritaanka ayaa muhiim u ah in la daboolo khasaaraha ka soo baxa shirkadaha SaaS guud ahaan khibrad. Inaad garaacdo rajooyinka iyo
Ku ilaali Tartankaaga tooska ah ee 'Rivalfox'
Sabtida, Maarso 14, 2015 Jimce, Maarso 13, 2015 Douglas Karr
Rivalfox waxay xog ka uruurisaa ilo kala duwan oo ku saabsan tartamayaashaada waxayna ka dhigeysaa xogta si fudud looga heli karo hal xarun xogta tartameyaasha. Ilaha waxaa ka mid ah taraafikada, raadinta, degelka, warsidaha, saxaafadda, arrimaha bulshada iyo xitaa dadka iyo isbeddelada shaqada. Rivalfox waa xal SaaS ah oo gacmahaaga gelinaya caqli tartan adag. Waxaan aaminsanahay inaad wax ka barato tartamayaashaada, inaad si dhakhso leh u kori karto, iskana ilaalin karto khaladaadka oo aad ka faa'iideysan karto. Iyadoo la adeegsanayo Rivalfox, shirkadaha nooc kasta leh way awoodaan